Yaa noqon doona Kabtanka Arsenal kaddib tagistii Mikel Arteta? – Gool FM
(London) 18 Luulyo 2016. Lama shaacin cidda noqon doonta kabtanka Arsenal tan iyo sidii uu kooxda uga tagay kabtankooda Mikel Arteta.
Per Mertesacker ayaa lagu wadaa in loo gacan galiyo kabtannimada Arsenal ka hor xilli ciyaareedka cusub sida ay fahsan tahay Goal.com.
31-jirka reer Germany, mid ka mid ah xiddigaha ugu khibrada badan kooxda ayaa lagu abaal marin doonaa daacadnimadiisa iyadoo loo xiri doono kabtannimada kaddib Mikel Arteta oo ciyaaraha ka fariistay si uu xil tababaranimo uga qabto Man City.
Laurent Koscielny ee daafaca dambe kala ciyaara Mertesacker ayaa isna noqon doona kabtan ku xigeenka kooxda halka Petr Cech iyo Theo Walcott ayaa iyana noqon doona dooqyada sii xiga haddii aysan labada hore garoonka ku jirin.
Inkastuu heshiiska Mertesacker dhici doono dhammaadka kal ciyaareedka soo socda misane waxaa daafaca jooga dheer aaminsan xubno ka tirsan shaxda kooxda, mana bilaaban weli wada hadalada heshiiska loogu kordhinayo daafacan iyadoo uuna Tababare Wenger doonayo inuu adkeeyo daaficiisa isagoo la soo saxiixanaya daafaca lacagaha badan lagu qiimeeyay ee 20-jirka u safta Bolton Rob Holding.
Arsene Wenger ayaa sidoo kale ka shaqeynaya inuu wax ku soo daro weerarkiisa inkastoo xiisihiisa weeraryahanka Napoli Gonzalo Higuain uu dhacay, waxaana la filayaa in Juventus ay usbuucan dhammeystirto saxiixa weeraryahanka reer Argentina.